Ndakakagadzirira size inotenga pano paMzansi – Vanoda Zvinhu
Kune vachiri kurangarira mai vaya vandakazokwapura palodge yekuMidrand kuno kuMzansi kwandakazosangana nekamuPede kaishandapo kasingade kupfuurwa nezvinhu senhunzi )
Ndakatowarairwa zvangu ndakazonzwa ndapinzirwa phone nekanjani kaya kekulodge kuMidrand (S.A) ndikati hekani waro,ndookubasa! Pasina nguva ndakabva ndapinda mumota,ndini uyo,R21 route ndakananga kuTembisa frm Boksburg..Sezvo kachimoko kaiva pa off kakabva kanditi ndisvike kumaraini kwakaigara.Tembisa ipi yandaiziva,,ndakazongogaya kungokanda kaadress kacho paGPS..Pasina nguva ndakazonzwa kamukadzi kepaGPS kosheedzera kuti.”in 100 metres your destination will be on your right”.Faster faster ndakabva ndafonera bhebhi wanikwe rakatondigadzirira size inotenga .
Kune mamwe mabhebhi akangorongeka semunhu anochovha bhasikoro ,anofamba akagadzirira coz anytym rinogona kungoponja!!
Dzimwe nguva iwo ma uniform atinozopfekawo mumabasa umu anozobvisa mamwe mapoints mhani.Zvandakamuona ari on the day i met her kulodge ari pagraft haaaa masamba anga atosiyana!! Simbi yakabuda yakapfeka ka tight kaya kanoita sekunge munhu akaitwa zvekupendwa nepaint yegreen..Type yangu munoiziva wani,dako iri raiita sekunge rakaconnetwa pa vibrator paakatendeuka achivhara gate.Izvi zvaitongorovesa hana vaya vasina kuzvijaira!! Kachingosvika pamota kakanditi ngatipindei mumba,,Ndakakasika kugaya yandakambotambwa paCapetown yekuzobatwa muden ;ndikati handiite madhiri akadhakwa iwayo,ngatitsvagei lodge.
Sir John Sinhi (blambi) vanga vatoneta nekungobuda misodzi nekuti vanga vanonokerwa kuwachisa kadinga aka.Ndakaivhetemesa Audi RS4 ndakananga kune kamwe kalodge kandainge ndango gugulawo!! Ndichisvika paya zvikanzi kari fully booked..Then i was refered to another lodge kaiva nechekuma plots. On my way there i realised kuti it was an isolated place,bushy and so quite zvekuti taingonzwa shiri chete.So adventurous.!! Aaaah ko kulodge kwakazosvikwa here?? I jus turned and followed a gravel road then for about a kilometer ndobva tapinda zvedu mukasango kaiva muplot iroro!!
“Hey yu,,yu are so naughty,but this is so cool i tell yu”…Mashoko echimoko akabva andipasa manyemwe.! Pasina nguva ndakange ndatorodza kare.
Kana museve wada nyama,unodauka.Jacket randaiva naro ndakabva ndariti katanu katanu ndikariwaridza pasi..Zviya zvekuti ndakaritenga kuMarkham richidhura zvakazoziikanwa naani.Pfungwa dzinenge dzotongwa nebeche!(G-string Government).
Twuhembe twainge twakangopfekwa zvekurasisa vavengi chete zvekuti ndakangotwubvisa nekasiyanwa..
Ndakarohwa nehana ndichisangana netatoo rakadhindwa nechepaguvhu apa..so sexy !!Mwana anga akaumbwa nehunyanzvi,,iya yatinoti “fearfully and wonderfully made”!! Varume ka pfungwa dzikanonoka kufunga pakadai unogona kufungirwa nemboro ukaguma warova nyoro coz kune twumwe twuma body twakaumbwa zvekuti yu cannot resist nyorovita!!Mwana anga ane zvinhu zvake..Akarara nedumbu yu could see thoz bootilicious curves,,onion shaped butt so smooth like a Samsung curved LED TV..Ndakangoyeva ndikazvibvunza kuti ndini here ndiri kurima gombo iri !!
Pasina nguva ndakange ndatoruma zamu uku rumwe ruoko rwuchitambisa matinji..Ndakanzwa kachimoko kofemera pamusoro sendere ndikati henarooo,, .Mwana ndakamubata kusvika atunda first time. Akazosimuka ndobva atanga kundi masterbater zvinyororo pasina nguva ndakabva ndatunda asi mboro yakaramba ine hukasha hwerovambira yapfungaidzirwa chiutsi..Wadenha mangwiro wotokwinya coz vanondiziva vanoziva kuti ukasasimba unogona kubhenda chass!!
Faster faster condom ranga ratopfekwa ndikai amai chimbofongorai makabata boot reAudi..Uuuuummm anhu weee zviro zvidobviro dakadza izvi..
Ndakangoiti pfee zvishoma ndakaona mwana wevanhu ashama muromo senyana renjiva nekunakirwa.Nechemukati yaiita kakudziirira uchinzwa ichiita kakugwinha gwinha..Zvishoma nezvishoma ndakatanga kukovira kusvika mboro yese yamedzwa nebeche.Ndakaona chimoko chatanga zvino kutambisa chiuno sezingizi.Mwana aiva nechipo zvake chekurova chikapa..Ini ndakaramba ndakaibairira ndichingoteedzera rhythm..aiti akadzikirira zvishoma then oita kakukwiririra haaaa gotsi raibva raoma. Ngakazoona kuti pano zvatoipa.Ndakamubata nechepa shoulder ne1 hand rimwe ndakabata magaro ake sechikirimbani..Ndakazoona mota yotambirirawo ndikabva ndaziva kuti kachimoko kave kutapirirwa..Have yu ever heard kaya kasound kekugomera kana uchimama duzvi rema guava!! (Yaa that sound,yu kno it)”.Aaah aaah !!Fuck me hard .Fuck me hard…harder..harder”…Zvayange yatova mhere.Ndakaramba ndichipomba chete,,Ndaiti ndikamupressa hard ndakabata musana against the car aibva awedzera that groaning sound..
Pasina nguva ndakanzwa asunga beche nekugwinha gwinha at the same time..That same time yakazvomorwa mboro ndobva andifacer..akatunda zvekuti akaita weti yakapotsa yandirova kumeso chaiko!! Tsaaaaaaa!! Akabva andimbundikira achibuda misodzi….
Apedza kundipukuta akabva atanga kundikisa zvinyoronyoro.Semunhu anga asati atunda,tsano John sinhi vanga vachiri nehukasha!!
This time even nyoro yaiita coz ndanga ndakutofunga zvekushudha beans kusvika satan ati sorry!!
Ndakati kachimoko kaite zvekurara nemusana iya yakajairwa nevakawanda,ndobva kakochekera makumbo on my shoulders zvekuti beche rinosara rava pachena serembudzi..rakaita kachuru kudai..This time condom handina kutombofunga nezvaro.Ndakangoishwetedzera ka1 kusvika ku 16 area box !! Mwana akange oita zvaanoziva manje.Dako raiti rikatenderedzwa ,roendeswa mberi neshure!!aaah papi pacho,ini ndanga ndakangoisa mu neutral zvangu ndakangomirira kuti kana rave kunogohwa ndobva ndagohwesa..Zvinhu zvacho zvinotoda mushandirapamwe!! Ndakazoti ndatanga zvino kupomba zvekusadzora tsvimbo..Ndaiti ndikaita sekunge ndiri kuiburitsa kachimoko kondipinna down nemakumbo!! Pasina nguva ndakaona mwana wevanhu aita zvekundisunga nemakumbo..Takaramba takabatana kunge tarohwa nemagetsi,,no movement,no sound!! After a minute or so,,she loosened her legs ndikabva nda ziva kuti ndakasvitsa kumapena !!
Takazobva apa zuva rave kunorereka after mboro yave kurwadza nekungorova nyoro after nyoro..Nyangwe pakadai apa even aya mapiritsi ekudzivirira nhumbu haashande zvekumhanya.
Zvisineiwo nanhasi ndichiri kungodya rifa..Haaaa zvimwe idyai zvenyu ini ndiri kuwachisa maSouth Africans pano paMzansi..
· Last modified June 23, 2015 Kusvirwa kwandakaita paweekend na farie
Next story Kudya Murume wangu Blambi for the first time
Previous story Makwiriro andakazoita kaTeacher ke Maths